အကြွင်းအကျန်စားကာ ဟောင်နေသူများသို့ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကို အမိန့်ပေးလို့ရမယ်လို့ ထင်ထားတဲ့အာဏာရှင်ကြီးများအပါအ၀င် ဘေးနားကနေ အရိုးကိုက်ပြီး သခင်အလိုကျ မဲမဲမြင်တိုင်းလိုက်ကိုက်နေသော လူထုတွေအများကြီးထဲမှာ ကျွန်မနှင့်ထိပ်တိုက်ဆုံခဲ့ရသော စစ်ခွေးတစ်ချို့ကို ဖော်ပြလိုစိတ်ရှိတာနဲ့ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ လင်းလက်ကြယ်စင်ကို မမြင်ရတဲ့အွန်လိုင်းတစ်နေရာနေ အမိန့်လာပေးနေသော စစ်အာဏာရှင် လူကြီးမင်းများရှင် ၊ ကျွန်မဘလော့ခ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်စာများ ၊ ဝေဖန်ရေးစာပေါင်းများစွာကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သလို ကျွန်မဘက်ကလည်း ခိုင်မာသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကို တင်ပြလိုပါတယ်.. တစ်ချို့လူတွေပြောသလို ကျွန်မ ဘလော့ခ်က အရည်မရ အဖတ်မရဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မအတွေးထဲက ခံစားချက်ကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး.. ဥပမာတစ်ခု ကျွန်မပေးပါမယ်.. ပြည်ပမှာနှစ်တွေ အများကြီးကြာနေ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းကေ၇ာက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာကလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်.. မိဘတွေက စားဝတ်နေရေးအတွက် သူတို့ရုန်းကန်နေရချိန်မှာ ကလေးတွေကို နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သတ် ဘာမှပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး… မြန်မာပြည်က ဘယ်လိုနိုင်ငံလည်းဆိုတာ သေချာမသိကြသလို သူတို့မှာလည်း မြန်မာစာကို ဖတ်တတ်ရုံလောက်ပဲသိကြပါတော့တယ်.. ကျွန်မမှာ အဲဒီလိုသူငယ်ချင်းပေါင်းများစွာ နေရာတိုင်းမှာ အများကြီးရှိပါတယ်.. သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံရေးဝဘ်ဆိုဒ်တွေကိုလည်း ဖတ်လေ့မရှိပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မနဲ့ခင်သူ အများစုက ကျွန်မရေးတဲ့ ကဗျာတွေ ၊ ၀တ်ထုတွေကို အားပေးနေကြဖြစ်တော့ ကျွန်မဘာရေးရေး အနည်းဆုံးတော့ လိုက်ဖတ်မှတ်ချတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ် <!– D([“mb”,”.. ကျွန်မဘလော့ခ်ကနေ ပတ်သတ် မြန်မာသမိုင်းကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလာသူများရှိသလို ကျွန်မဘက်ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရှာဖွေပေးခြင်း ၊ ကျွန်မကိုယ်တိုင်စာပြန်ဖတ်ပြီး သေချာရှင်းပြပြီး သီပေါမင်းခေတ်ကနေ အခု နအဖခေတ်ထိ အတိုချုန်းပြောပြခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရင်ထဲကို အံ့သြခြင်းများစွာနှင့်အတူ နာကြဉ်းစိတ်များအနည်းငယ်တော့ ၀င်သွားကြပါတယ်.. \_nမြန်မာပြည်က ဘယ်အခြေအနေရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိပြီး လျစ်လျူရှုထားတဲ့လူတွေရင်ထဲကိုလည်း အနည်းဆုံးတော့ တုန်ခါသွားမယ်လို့ ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်… အခုအချိန်မှာ ကျွန်မဘက်က ဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်တဲ့အတွက် ရရာနေရာမှာ အကောင်းဆုံးကို ၀င်ရောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မက ဦးမင်းကိုနိုင်အမျိုးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ရှင်… အလယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀ကတည်းက ကျွန်မရင်ထဲမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သတ် အများကြီးသိခဲ့ရသလို ခံယူချက်လည်းရှိပြီးသားပါ… ပထမဦးဆုံးအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မ တင်ပြပါ့မယ် ဦးစစ်ခွေးများရှင်.. ကျွန်မ (၈)တန်းတုန်းက မမေ့နိုင်သောဖြစ်ရပ်များဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျောင်းတွင်းစာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရပါတယ်.. မြို့မကျောင်းရဲ့ ဦးဘလွင်ခန်းမမှာပါ… ကျွန်မရေးလိုက်တဲ့အဖြစ်ပျက်ထဲမှာ ၈လေးလုံးအရေးအခင်းမှာ ကျွန်မ အဘိုးတွေ ဘယ်လိုသေခဲ့တယ်ဆိုတာကို အနည်းငယ်ရေးလိုက်မိတယ်… အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မ တကယ်ကြားသိရပြီး မမေ့နိုင်လို့ မမေ့နိုင်ဘူးရေးလိုက်မိတာကြောင့် တစ်ခါတည်း တိုင်စာနှင့်တကွ အပြုတ်ခံထိခဲ့ရပါတယ်. အေခန်းရဲ့ ဂုဏ်ကို မဆောင်နိုင်ခဲ့ရလို့ အနည်းငယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.. သူများလို ကပ်ဖားရပ်ဖားေ၇းပြီး ပထမဆုဆိုတာကြီးကို ဆွတ်ခူးဖို့တော့ မလုပ်နိုိင်ပါဘူး.. (၉)တန်းကျောင်းသူဘ၀မှာတော့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပါတယ်.. ကျွန်မက မြို့နယ်အဆင့်မှာ အောင်မြင်ပြီးလူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရတာပါ… \_nကျွန်မရေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်က `လူငယ်များနှင့်အနာဂတ်တိုင်းပြည်´ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ကိုပါပဲ.. ကျွန်မ သေချာစဉ်းစားပြီး လူငယ်များဖြစ်လိုသော ဆန္ဒနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေသော နိုင်ငံတော်ကြီးအခြေအနေ ၊ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လို ဆက်လက်ပျက်စီးမှာလည်း ၊ အတိတ်က သွေးသံရဲရဲအဖြစ်အပျက်တွေကို လူငယ်တွေ ဘယ်လိုတော်လှန်မှာလည်းဆိုတာကို ရေးချလိုက်တာ ဘယ်နှစ်မျက်နှာရှိသွားလည်းတောင်မသိတော့ဘူး.. ဘဲလ်တီးမှ လူက အသက်ဝင်လာသလို သတိပြုရင်း လက်စသပ်ခဲ့ပါတယ်.. \_nနောက်၂ရက်ခန့်ကြာတော့ ကျောင်းရုံးခန်းက မိဘချက်ချင်းအခေါ်လွှတ်ပါတယ်.. ကျွန်မလည်း အနည်းငယ်တော့ ရိပ်မိပါတယ်.. ခပ်အေးအေးပဲ အမေကို ခေါ်ပြီး ရုံးခန်းတက်ခဲ့တယ်. မျက်နှာစိမ်းလူတစ်ချို့နဲ့အတူ မျက်နှာမကောင်းတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ၊ ပညာရေးမှုးနဲ့ ဆရာမတစ်ချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်..\_n”,1] ); //–> .. ကျွန်မဘလော့ခ်ကနေ ပတ်သတ် မြန်မာသမိုင်းကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလာသူများရှိသလို ကျွန်မဘက်ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရှာဖွေပေးခြင်း ၊ ကျွန်မကိုယ်တိုင်စာပြန်ဖတ်ပြီး သေချာရှင်းပြပြီး သီပေါမင်းခေတ်ကနေ အခု နအဖခေတ်ထိ အတိုချုန်းပြောပြခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရင်ထဲကို အံ့သြခြင်းများစွာနှင့်အတူ နာကြဉ်းစိတ်များအနည်းငယ်တော့ ၀င်သွားကြပါတယ်.. မြန်မာပြည်က ဘယ်အခြေအနေရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိပြီး လျစ်လျူရှုထားတဲ့လူတွေရင်ထဲကိုလည်း အနည်းဆုံးတော့ တုန်ခါသွားမယ်လို့ ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်… အခုအချိန်မှာ ကျွန်မဘက်က ဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်တဲ့အတွက် ရရာနေရာမှာ အကောင်းဆုံးကို ၀င်ရောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မက ဦးမင်းကိုနိုင်အမျိုးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ရှင်… အလယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀ကတည်းက ကျွန်မရင်ထဲမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သတ် အများကြီးသိခဲ့ရသလို ခံယူချက်လည်းရှိပြီးသားပါ… ပထမဦးဆုံးအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မ တင်ပြပါ့မယ် ဦးစစ်ခွေးများရှင်.. ကျွန်မ (၈)တန်းတုန်းက မမေ့နိုင်သောဖြစ်ရပ်များဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျောင်းတွင်းစာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရပါတယ်.. မြို့မကျောင်းရဲ့ ဦးဘလွင်ခန်းမမှာပါ… ကျွန်မရေးလိုက်တဲ့အဖြစ်ပျက်ထဲမှာ ၈လေးလုံးအရေးအခင်းမှာ ကျွန်မ အဘိုးတွေ ဘယ်လိုသေခဲ့တယ်ဆိုတာကို အနည်းငယ်ရေးလိုက်မိတယ်… အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မ တကယ်ကြားသိရပြီး မမေ့နိုင်လို့ မမေ့နိုင်ဘူးရေးလိုက်မိတာကြောင့် တစ်ခါတည်း တိုင်စာနှင့်တကွ အပြုတ်ခံထိခဲ့ရပါတယ်. အေခန်းရဲ့ ဂုဏ်ကို မဆောင်နိုင်ခဲ့ရလို့ အနည်းငယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.. သူများလို ကပ်ဖားရပ်ဖားေ၇းပြီး ပထမဆုဆိုတာကြီးကို ဆွတ်ခူးဖို့တော့ မလုပ်နိုိင်ပါဘူး.. (၉)တန်းကျောင်းသူဘ၀မှာတော့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပါတယ်.. ကျွန်မက မြို့နယ်အဆင့်မှာ အောင်မြင်ပြီးလူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရတာပါ… ကျွန်မရေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်က `လူငယ်များနှင့်အနာဂတ်တိုင်းပြည်´ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ကိုပါပဲ.. ကျွန်မ သေချာစဉ်းစားပြီး လူငယ်များဖြစ်လိုသော ဆန္ဒနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေသော နိုင်ငံတော်ကြီးအခြေအနေ ၊ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လို ဆက်လက်ပျက်စီးမှာလည်း ၊ အတိတ်က သွေးသံရဲရဲအဖြစ်အပျက်တွေကို လူငယ်တွေ ဘယ်လိုတော်လှန်မှာလည်းဆိုတာကို ရေးချလိုက်တာ ဘယ်နှစ်မျက်နှာရှိသွားလည်းတောင်မသိတော့ဘူး.. ဘဲလ်တီးမှ လူက အသက်ဝင်လာသလို သတိပြုရင်း လက်စသပ်ခဲ့ပါတယ်.. နောက်၂ရက်ခန့်ကြာတော့ ကျောင်းရုံးခန်းက မိဘချက်ချင်းအခေါ်လွှတ်ပါတယ်.. ကျွန်မလည်း အနည်းငယ်တော့ ရိပ်မိပါတယ်.. ခပ်အေးအေးပဲ အမေကို ခေါ်ပြီး ရုံးခန်းတက်ခဲ့တယ်. မျက်နှာစိမ်းလူတစ်ချို့နဲ့အတူ မျက်နှာမကောင်းတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ၊ ပညာရေးမှုးနဲ့ ဆရာမတစ်ချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်.. <!– D([“mb”,” ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသန်းခေါင်စာရင်းကအစ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သတ်ခြင်းရှိ ၊ မရှိ စစ်ဆေးမေးမြန်းပါတောတ့ယ်.. ကျွန်မအမေကတော့ ကျွန်မကိုကြည့်ရင်း ဒေါသထွက်နေပါတယ်… ကျွန်မကတော့ အမေကို သွားလေးဖြီးပြခဲ့တယ်.. \_nကျွန်မတို့က ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ ပတ်သတ်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင် ၀န်ထမ်းတွေပါပဲ.. နောက်တော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကောင်းမှုနဲ့ ဘေးမသီ ရန်မခ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်.. ကျောင်းသူတစ်ဦးက သူ့အတွေးကိုတင်ပြခြင်းက နိုင်ငံတော်ကိုပုန်ကန်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးပါဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့တကွ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကျောင်းအထုတ်မခံခဲ့ရပါဘူး.. ကျောင်းထုတ်လည်း ဂရုစိုက်မယ့်လူမျိုးထဲ မပါဘူး.. ပိုတောင်ပျော်အုန်းမှာ.. ဘာဖ်ြစလို့လည်းသိလား.. ကျွန်မ အလယ်တန်းတက်ကတည်းက ပြည်ပ ကျွန်မအဖေနဲ့ ဆွေမျိုးတစ်သိုက်က ပြည်ပအခြေအနေ ၊ လူသားအခွင့်အရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ အားလုံးကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေနဲ့ စာထည့်ပေးတဲ့အပြင် ဓါတ်ပုံများ သာဓကများကိုပါ ရင်းနှီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မက ကျွန်မနိုင်ငံကိုအဲဒီလိုပြောင်းလဲစေချင်ခဲ့တာ ကလေးဘ၀က ခပ်သေးသေးအတွေးလေးပါ.. နောက် ပြည်ပမှာ စာသင်ခွင့်ရချင်သလို အရာအားလုံးကို တရားမျှတတဲ့နေရာမှာနေခဲ့ချင်တယ်.. အချိန်မကျသေးတာရော ၊ ကျွန်မအမေက မြန်မာနိုင်ငံကိုမခွဲချင်သေးတာနဲ့ပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မှာပဲ သောင်တင်နေရတယ်.. တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အကာကွယ်ဆိုပြီး အဖေကတော့ ကျွန်မကို မြန်မာကျောင်းနဲ့ ILBC ကို ခွတက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်.. \_nမြန်မာကျောင်းကထုတ်ပစ်လည်း ၊ ဘာထောက်ခံချက်မှ မပေးလည်း သိပ်တော့ ဂရုမစိုက်ဘူး… ဒါပေမယ့် ကျွန်မအမြဲကံကောင်းနေတယ်ဆိုရမလား.. ပြသနာဖြစ်တိုင်း ထောက်လှမ်းရေးမှာအရာရှိဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဦးလေး ( အခုတော့ ခွေးပြေး ၀က်ပြေးနဲ့ ထိုင်းမှာ ကုန်သည်လုပ်နေပါတယ် ) သူက အမြဲ ကူညီလေ့ရှိသလို အတော်ကံကောင်းခဲ့တယ်ဆိုရမယ်.. \_n
ကျွန်မ ပြည်ပရောက်တော့ နေထိုင်ခွင့်နဲ့ကျောင်းကို ၁နှစ်လောက် အချိန်ပေး အားအရင်စိုက်ခဲ့၇တယ်.. အခုအချိန်မှာ ကျွန်မမှာ အသိတွေလည်း အတော်များခဲ့ပြီ.. ကျွန်မလုပ်နေတဲ့ စာပေတွေကိုလည်း အားပေးသူ အွန်လိုင်းမှာပဲ အတော်ကိုများခဲ့ပြီ.. ကျွန်မနဲ့ခံယူချက်တူသူတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပြီ… အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့နဲ့လည်း သိခဲ့ရပြီ…\_n ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မခံယူချက်ကို ရေးသားတင်ပြပြီး ကျွန်မကို အဖွဲ့အစည်းထဲဝင်သင့်ပြီး ကူညီပါဆိုလည်း လုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ… မြန်မာပြည်ကိုချစ်လို့ တစ်သက်တာခွဲခဲ့၇တဲ့ လူတွေကိုကြည့်ပြီး ၇င်ထဲမှာ မဖော်ပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေ အများကြီးတိုးဝင်လာပါတယ်.. မြန်မာပြည်ကို မရောက်ဖူးတဲ့ ၊ ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးရွယ်တူတွေကိုကြည့်”,1] ); //–> ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသန်းခေါင်စာရင်းကအစ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သတ်ခြင်းရှိ ၊ မရှိ စစ်ဆေးမေးမြန်းပါတောတ့ယ်.. ကျွန်မအမေကတော့ ကျွန်မကိုကြည့်ရင်း ဒေါသထွက်နေပါတယ်… ကျွန်မကတော့ အမေကို သွားလေးဖြီးပြခဲ့တယ်.. ကျွန်မတို့က ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ ပတ်သတ်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင် ၀န်ထမ်းတွေပါပဲ.. နောက်တော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကောင်းမှုနဲ့ ဘေးမသီ ရန်မခ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်.. ကျောင်းသူတစ်ဦးက သူ့အတွေးကိုတင်ပြခြင်းက နိုင်ငံတော်ကိုပုန်ကန်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးပါဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့တကွ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကျောင်းအထုတ်မခံခဲ့ရပါဘူး.. ကျောင်းထုတ်လည်း ဂရုစိုက်မယ့်လူမျိုးထဲ မပါဘူး.. ပိုတောင်ပျော်အုန်းမှာ.. ဘာဖ်ြစလို့လည်းသိလား.. ကျွန်မ အလယ်တန်းတက်ကတည်းက ပြည်ပ ကျွန်မအဖေနဲ့ ဆွေမျိုးတစ်သိုက်က ပြည်ပအခြေအနေ ၊ လူသားအခွင့်အရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ အားလုံးကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေနဲ့ စာထည့်ပေးတဲ့အပြင် ဓါတ်ပုံများ သာဓကများကိုပါ ရင်းနှီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မက ကျွန်မနိုင်ငံကိုအဲဒီလိုပြောင်းလဲစေချင်ခဲ့တာ ကလေးဘ၀က ခပ်သေးသေးအတွေးလေးပါ.. နောက် ပြည်ပမှာ စာသင်ခွင့်ရချင်သလို အရာအားလုံးကို တရားမျှတတဲ့နေရာမှာနေခဲ့ချင်တယ်.. အချိန်မကျသေးတာရော ၊ ကျွန်မအမေက မြန်မာနိုင်ငံကိုမခွဲချင်သေးတာနဲ့ပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မှာပဲ သောင်တင်နေရတယ်.. တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အကာကွယ်ဆိုပြီး အဖေကတော့ ကျွန်မကို မြန်မာကျောင်းနဲ့ ILBC ကို ခွတက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်.. မြန်မာကျောင်းကထုတ်ပစ်လည်း ၊ ဘာထောက်ခံချက်မှ မပေးလည်း သိပ်တော့ ဂရုမစိုက်ဘူး… ဒါပေမယ့် ကျွန်မအမြဲကံကောင်းနေတယ်ဆိုရမလား.. ပြသနာဖြစ်တိုင်း ထောက်လှမ်းရေးမှာအရာရှိဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဦးလေး ( အခုတော့ ခွေးပြေး ၀က်ပြေးနဲ့ ထိုင်းမှာ ကုန်သည်လုပ်နေပါတယ် ) သူက အမြဲ ကူညီလေ့ရှိသလို အတော်ကံကောင်းခဲ့တယ်ဆိုရမယ်..
ကျွန်မ ပြည်ပရောက်တော့ နေထိုင်ခွင့်နဲ့ကျောင်းကို ၁နှစ်လောက် အချိန်ပေး အားအရင်စိုက်ခဲ့၇တယ်.. အခုအချိန်မှာ ကျွန်မမှာ အသိတွေလည်း အတော်များခဲ့ပြီ.. ကျွန်မလုပ်နေတဲ့ စာပေတွေကိုလည်း အားပေးသူ အွန်လိုင်းမှာပဲ အတော်ကိုများခဲ့ပြီ.. ကျွန်မနဲ့ခံယူချက်တူသူတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပြီ… အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့နဲ့လည်း သိခဲ့ရပြီ… ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မခံယူချက်ကို ရေးသားတင်ပြပြီး ကျွန်မကို အဖွဲ့အစည်းထဲဝင်သင့်ပြီး ကူညီပါဆိုလည်း လုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ… မြန်မာပြည်ကိုချစ်လို့ တစ်သက်တာခွဲခဲ့၇တဲ့ လူတွေကိုကြည့်ပြီး ၇င်ထဲမှာ မဖော်ပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေ အများကြီးတိုးဝင်လာပါတယ်.. မြန်မာပြည်ကို မရောက်ဖူးတဲ့ ၊ ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးရွယ်တူတွေကိုကြည့် <!– D([“mb”,”ပြီး မခံချင်စိတ်တွေ တိုးဝင်နေပါတယ်.. ပြည်ပရောက်တာတောင် ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့တာတောင် ကျွန်မကို ရပ်မလား မရပ်ဘူးလားဆိုပြီး အမိန့်ပေးနေသော လူတစ်စုရှင် ကျွန်မဘက်က မည်သို့သောနည်းနဲ့မျှ ရပ်တန့်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ… ကျွန်မက တစ်ဘို့တည်း မကြည့်တတ်ပါ.. ကျွန်မနဲ့ သိတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက မနေ့ညက ကျွန်မဂျီတော့ခ်တက်တော့ အမေစုပုံတင်ထားတာကိုကြည့်ပြီး ချက်ချင်းဖြုတ်ပါတဲ့. မလုပ်နဲ့ဆို ပိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ မတရားမှုကို လက်မခံတဲ့အကျင့်ကြောင့် အေ၇းကိုမစိုက်ခဲ့ဘူး.. သူက ဆက်ပြောပါသေးတယ်.. ` လူတွေပြောတာမယုံနဲ့ညီမလေး။ ကိုယ်တို့နိုင်ငံအစိုးရကကောင်းပါတယ်။ အဲဒါတွေမလုပ်နဲ့နော်´တဲ့…. ကျွန်မ ခွက်ထိုးခွက်လန်ရီလိုက်ပါတယ်.. ကမ္ဘာအယုတ်မာဆုံးဘွဲ့ကိုရထားတာ ကောင်းပါတယ်လို့ပြန်ပြောတော့ သူအတော်ခံပြင်းသွားပုံရတယ်.. နောက်ပိုင်း ကျွန်မ ချတ်တင်ကိုသိပ်စိတ်ဝင်စားတော့တာမဟုတ်ဘူး.. သွားခဲတယ်.. ကိစ္စရှိမှသာ ကျွန်မသွားလေ့ရှိတာမို့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ကျွန်မကိုပြောချင်နေလည်းမသိတဲ့လူတွေက ကျွန်မလာတာနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ် ပြောတော့တာပဲ… ကျွန်မကလည်း သိပ်ပြန်ပြောလေ့မရှိတော့ မာနကြီးတ်ယတဲ့.. ကိုယ့်ဘာသာ ကျောင်းစာအပြင် သတင်းတွေလည်း မလွတ်အောင် မနည်းလိုက်ဖတ်နေရတာ ခွေးနဲ့ပြိုင်ကိုက်ဖို့အချိန်မရှီလို့ ပြောမှ ပိတ်သွားပါတော့တယ်… အဲ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း အလာကြီးပဲရှင့် ( ကုလားမဟုတ်ပါ )။ \_nကျွန်မ ဒီလိုဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်မရေးမယ့်စာမူတွေကို လိုက်ပိတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့.. လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကတော့ အဲဒီစကား ကျွန်မကို ပြောလို့ရချင်ရမယ်.. အခုအချိန်ဆိုတော့ ကျွန်မ ခပ်အေးအေး ပြန်ပြုံးပြလိမ့်မယ်နော်..\_n မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဆောင်းပါး ၊ ကဗျာ ၊ ၀တ်ထုတိုရေးဖို့ဆိုတာ ကျွန်မရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ.. ကျွန်မအိပ်မက်ကိုတော့ ကျွန်မသိပ်မြတ်နိုးပါတယ်. စာပေရေးသားခြင်းက ကျွန်မအချစ်ဆုံး အနုပညာတစ်ခုပါ…. ကျွန်မဘလော့ခ်ကို စတင်ရေးသားချိန်ကစ ကျွန်မစိတ်က တစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားပါတယ်.. ကျွန်မ မြန်မာပြည်မှာ လင်းလက်ကြယ်စင်ဆိုတဲ့နာမည် ချခွင့်မရှိတော့ရင်နေပါစေ ၊ အိပ်မက်ကိုအိပ်မက်လိုပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့မယ်… ကျွန်မခံယူချက်နဲ့ လှုံဆော်မှုတွေကိုတော့ ဘယ်သောအခါမှ ရပ်တန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.. ကျွန်မနှလုံးသွေးက မခွဲနိုင်မခွာနိုင် သေမတတ်ချစ်ရသော ချစ်သူတစ်ယောက်ကိုတောင်မှ ကျွန်မ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ် အလျှော့ပေးခဲ့တာမဟုတ်တာ.. ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေကလည်း တားမရမှတော့ ကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ… တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုပေးရမယ်.. ကျွန်မထက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့လူတွေ ထောင် သောင်း သိန်းချီရှိခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်မ ဒါလေးစွန့်လွှတ်လိုက်တာ မပြောစလောက်ပါ.. မိမိအတ္တတစ်ခုအတွက် အများပြည်သူအတွက်အရာတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ရလောက်အောင် ကျွန်မ မကန်းသေးဘူး.. လူတစ်ယောက်ကတော့ ပြောတယ်.. လင်းလက်ကြယ်စင် မင်းကိုနှမြောတယ်.. မြန်မာပ်ြညမှာမင်းကိုစာပြန်ေ၇း”,1] ); //–> ပြီး မခံချင်စိတ်တွေ တိုးဝင်နေပါတယ်.. ပြည်ပရောက်တာတောင် ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့တာတောင် ကျွန်မကို ရပ်မလား မရပ်ဘူးလားဆိုပြီး အမိန့်ပေးနေသော လူတစ်စုရှင် ကျွန်မဘက်က မည်သို့သောနည်းနဲ့မျှ ရပ်တန့်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ… ကျွန်မက တစ်ဘို့တည်း မကြည့်တတ်ပါ.. ကျွန်မနဲ့ သိတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက မနေ့ညက ကျွန်မဂျီတော့ခ်တက်တော့ အမေစုပုံတင်ထားတာကိုကြည့်ပြီး ချက်ချင်းဖြုတ်ပါတဲ့. မလုပ်နဲ့ဆို ပိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ မတရားမှုကို လက်မခံတဲ့အကျင့်ကြောင့် အေ၇းကိုမစိုက်ခဲ့ဘူး.. သူက ဆက်ပြောပါသေးတယ်.. ` လူတွေပြောတာမယုံနဲ့ညီမလေး။ ကိုယ်တို့နိုင်ငံအစိုးရကကောင်းပါတယ်။ အဲဒါတွေမလုပ်နဲ့နော်´တဲ့…. ကျွန်မ ခွက်ထိုးခွက်လန်ရီလိုက်ပါတယ်.. ကမ္ဘာအယုတ်မာဆုံးဘွဲ့ကိုရထားတာ ကောင်းပါတယ်လို့ပြန်ပြောတော့ သူအတော်ခံပြင်းသွားပုံရတယ်.. နောက်ပိုင်း ကျွန်မ ချတ်တင်ကိုသိပ်စိတ်ဝင်စားတော့တာမဟုတ်ဘူး.. သွားခဲတယ်.. ကိစ္စရှိမှသာ ကျွန်မသွားလေ့ရှိတာမို့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ကျွန်မကိုပြောချင်နေလည်းမသိတဲ့လူတွေက ကျွန်မလာတာနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ် ပြောတော့တာပဲ… ကျွန်မကလည်း သိပ်ပြန်ပြောလေ့မရှိတော့ မာနကြီးတ်ယတဲ့.. ကိုယ့်ဘာသာ ကျောင်းစာအပြင် သတင်းတွေလည်း မလွတ်အောင် မနည်းလိုက်ဖတ်နေရတာ ခွေးနဲ့ပြိုင်ကိုက်ဖို့အချိန်မရှီလို့ ပြောမှ ပိတ်သွားပါတော့တယ်… အဲ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း အလာကြီးပဲရှင့် ( ကုလားမဟုတ်ပါ )။ ကျွန်မ ဒီလိုဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်မရေးမယ့်စာမူတွေကို လိုက်ပိတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့.. လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကတော့ အဲဒီစကား ကျွန်မကို ပြောလို့ရချင်ရမယ်.. အခုအချိန်ဆိုတော့ ကျွန်မ ခပ်အေးအေး ပြန်ပြုံးပြလိမ့်မယ်နော်.. မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဆောင်းပါး ၊ ကဗျာ ၊ ၀တ်ထုတိုရေးဖို့ဆိုတာ ကျွန်မရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ.. ကျွန်မအိပ်မက်ကိုတော့ ကျွန်မသိပ်မြတ်နိုးပါတယ်. စာပေရေးသားခြင်းက ကျွန်မအချစ်ဆုံး အနုပညာတစ်ခုပါ…. ကျွန်မဘလော့ခ်ကို စတင်ရေးသားချိန်ကစ ကျွန်မစိတ်က တစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားပါတယ်.. ကျွန်မ မြန်မာပြည်မှာ လင်းလက်ကြယ်စင်ဆိုတဲ့နာမည် ချခွင့်မရှိတော့ရင်နေပါစေ ၊ အိပ်မက်ကိုအိပ်မက်လိုပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့မယ်… ကျွန်မခံယူချက်နဲ့ လှုံဆော်မှုတွေကိုတော့ ဘယ်သောအခါမှ ရပ်တန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.. ကျွန်မနှလုံးသွေးက မခွဲနိုင်မခွာနိုင် သေမတတ်ချစ်ရသော ချစ်သူတစ်ယောက်ကိုတောင်မှ ကျွန်မ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ် အလျှော့ပေးခဲ့တာမဟုတ်တာ.. ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေကလည်း တားမရမှတော့ ကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ… တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုပေးရမယ်.. ကျွန်မထက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့လူတွေ ထောင် သောင်း သိန်းချီရှိခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်မ ဒါလေးစွန့်လွှတ်လိုက်တာ မပြောစလောက်ပါ.. မိမိအတ္တတစ်ခုအတွက် အများပြည်သူအတွက်အရာတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ရလောက်အောင် ကျွန်မ မကန်းသေးဘူး.. လူတစ်ယောက်ကတော့ ပြောတယ်.. လင်းလက်ကြယ်စင် မင်းကိုနှမြောတယ်.. မြန်မာပ်ြညမှာမင်းကိုစာပြန်ေ၇း <!– D([“mb”,”စေချင်တာတဲ့ အခုတော့ မင်းကအကန်းပဲတဲ့.. သူပြောသွားတာနော်.. ကျွန်မပြန်ပြောလိုက်တယ်.. ကျွန်မက မှန်ရာအတွက် တစ်ဖက်ပဲကန်းတာ.. ရှင်တို့က အမှန်ကိုမမြင်ဘဲ ကိုယ့်အတ္တအတွက် ၂ဖက်လုံးကန်းနေတာလို့… \_nနိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဓါတ်က ကလေးဘ၀ကတည်းက တစ်ခုခုကို မလုပ်နဲ့ဆို why လို့ပြန်မေးကြပါတယ်.. reason ကောင်းကောင်း အမှန်ကိုပေးနိုင်မှသာ သူတို့က လက်ခံတတ်ကြပါတယ်.. သူတို့လုပ်ချင်တာကို လာတားရင်လည်း မရပါဘူး.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရအောင်လုပ်ပြီးကောင်းကျိုးကိုလည်း သူတို့ခံမယ်.. ဆိုးကျိုးကိုလည်း သူတို့ပဲခံမယ်.. အဲဒီလို စိတ်ဓါတ်ထားကြသူချည်းပါပဲ.. မလုပ်နဲ့ဆို ခေါင်းမသုံးဘဲ ဒီလူကိုပစ်သတ်ဆို မစဉ်းစားဘဲ ပစ်သတ်တဲ့ လူစားမျိုး မရှိပါဘူး.. \_nနော်ဝေက အထက်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူတစ်ချို့က မြန်မာပြည်က ကလေးတွေဘ၀ကို ကြည့်ပြီး အိပ်မက်လားထင်ပါတယ်တဲ့… သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးချင်ပါတယ်တဲ့.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ တစ်ခွန်းပဲပြောဖြစ်ပါတယ်.. စစ်အာဏာရှင်က အပေါက်အားလုံးကို လိုက်ပိတ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ရင် အ၀ှာပေါက်တောင် လိုက်ပိတ်ချင်နေလားမသိ.. အကုန်ပိတ်နေမှ လောလောဆယ်တော့ မကူညီပါနဲ့အုန်း ကျေးဇူးရှင်တို့ရယ်… \_n
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် သဘောပေါက်ပါတယ်နော် ကျွန်မကို လာအမိန့်ပေးသူများ
“,1] ); //–> စေချင်တာတဲ့ အခုတော့ မင်းကအကန်းပဲတဲ့.. သူပြောသွားတာနော်.. ကျွန်မပြန်ပြောလိုက်တယ်.. ကျွန်မက မှန်ရာအတွက် တစ်ဖက်ပဲကန်းတာ.. ရှင်တို့က အမှန်ကိုမမြင်ဘဲ ကိုယ့်အတ္တအတွက် ၂ဖက်လုံးကန်းနေတာလို့… နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဓါတ်က ကလေးဘ၀ကတည်းက တစ်ခုခုကို မလုပ်နဲ့ဆို why လို့ပြန်မေးကြပါတယ်.. reason ကောင်းကောင်း အမှန်ကိုပေးနိုင်မှသာ သူတို့က လက်ခံတတ်ကြပါတယ်.. သူတို့လုပ်ချင်တာကို လာတားရင်လည်း မရပါဘူး.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရအောင်လုပ်ပြီးကောင်းကျိုးကိုလည်း သူတို့ခံမယ်.. ဆိုးကျိုးကိုလည်း သူတို့ပဲခံမယ်.. အဲဒီလို စိတ်ဓါတ်ထားကြသူချည်းပါပဲ.. မလုပ်နဲ့ဆို ခေါင်းမသုံးဘဲ ဒီလူကိုပစ်သတ်ဆို မစဉ်းစားဘဲ ပစ်သတ်တဲ့ လူစားမျိုး မရှိပါဘူး.. နော်ဝေက အထက်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူတစ်ချို့က မြန်မာပြည်က ကလေးတွေဘ၀ကို ကြည့်ပြီး အိပ်မက်လားထင်ပါတယ်တဲ့… သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးချင်ပါတယ်တဲ့.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ တစ်ခွန်းပဲပြောဖြစ်ပါတယ်.. စစ်အာဏာရှင်က အပေါက်အားလုံးကို လိုက်ပိတ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ရင် အ၀ှာပေါက်တောင် လိုက်ပိတ်ချင်နေလားမသိ.. အကုန်ပိတ်နေမှ လောလောဆယ်တော့ မကူညီပါနဲ့အုန်း ကျေးဇူးရှင်တို့ရယ်…
ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်ရင်းက ဒီဆိုက်ကို ဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းမသိဘူး။ ညီလင်းဆက် ဘလော့က နေတဆင့်ထင်တယ်။ အိပ်လို့မပျော်တာ နှင် ဟို ဆိုက်ဝင် ဒီဆိုက်ဝင်..ညီလင်းဆက် ဘလော့ ၀င်ဖတ်ဖြစ်တော့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ ဒီကနေ လင့် တွေ ကလစ် ရင်းဖတ်ရာကနေ လင်းလက်ကြယ်စင် ရဲ့ ဘလော့ ကိုဖတ်ရတယ်။
စာက အနည်းငယ် ကြမ်းသလိုရှိစေမဲ့ စေတနာက မကြမ်းတမ်းပါဘူး။တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် စိတ်အပြည့်နဲ့ ကလေးဘ၀ ကတည်းက မြင်မြင် တဲ့အတိုင်းစာစီကုံးရေးတဲ့သတ်တိ ကိုတယ်ချီးကျူးမိပါတယ်။ မြန်မာပြည် ဆိုတာ တစ်ချိန်က အရှေ့တောင် အာရှ မှာ အချမ်းသာဆုံးပါ။ အခုတော့….အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဘယ်သူမှာတာဝန်ရှိသလဲ။ သေချာတာကတော့ လူကြီးတွေ အသုံးမကျ တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်။လင်းလက် ကြယ်စင်ရဲ့ ဘလော့ထဲက အောက်ပါစာသားကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဓါတ်က ကလေးဘ၀ကတည်းက တစ်ခုခုကို မလုပ်နဲ့ဆို why လို့ပြန်မေးကြပါတယ်.. reason ကောင်းကောင်း အမှန်ကိုပေးနိုင်မှသာ သူတို့က လက်ခံတတ်ကြပါတယ်.
ဒီလိုကလေးလေးတွေ များသထက်များလာမှ နိုင်ငံကောင်းစား မယ်ဆိုတာ သံသယ မရှိပါ။ လိုက်လံ ပိတ်ပင်တားမြစ်နေသူ များမှာ သူတို့ဦးနှောက်ကို သူတို့အသုံးချခွင့်မရကြပါ။ သေချာစဉ်းစားရင် တကယ်ပင် သနားစရာကောင်းလှပါသည်။
Comment by Anonymous September 23, 2006 @ 8:58 pm